Galaxy Note 10 ma lahaan doono booska ballaarinta ee microSD Androidsis
Dhowr toddobaad ka hor, mala-awaal ayaa bilaabmay oo ku saabsan suurtagalnimada in Galaxy Note ee soo socota, lambarka 10 si gaar ah, uu suuqa ugu dhici doono iyada oo aan lahayn jaranjarada taleefanka, jaakad ay goor dhow ama ka dib ku khasbanaan doonto Samsung, in kasta oo ay ka mid ahayd wax soosaarayaal yar oo weli ku sii sharxaya isaga.
Warkan ma ahan mid cusub, waxaan daabacnay dhowr maqaal kal hore oo muujinaya isbadalkan muhiimka ah. Maanta waa inaan ka hadalnaa isbeddel soo jiidan kara dareen gaar ah taasna hubaal inaysan ku qosli doonin raacayaasha shirkaddan tan iyo markii booska balaadhinta ee lagu daro microSD wuxuu umuuqdaa inuu sidoo kale baaba'ayo.
Macluumaadkan wuxuu ka yimid Max Weinbach, oo ka socda XDA Developers, kaasoo daabacay qoraal uu ku sameeyay liistada dhammaan sifooyinka aan laga heli doonin labada Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note 10 Pro. Waxa ugu caansan waa luminta booska ballaarinta ee kaararka microSD.
Sida muuqata astaamahan waxaa laga heli karaa oo keliya Xusuus-qorka 10 Pro ee ma ahan nooca caadiga ah. Sida laga soo xigtay isha Weinbach, labada nooc midkoodna ma bixin doono iskuxirka dhagaha, in kasta oo xaqiiqda ah in Samsung ay baahisay sawir la moodayay oo ah Xusuusta 10 kaas oo lagu arkay xiriir jack.
Macluumaadka Weinbach daabacay wuxuu ka yimid noocyo aad u horumarsan, sidaas darteed dhammaan sharadada aad ku sameysay boostadaada ee ku saabsan Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note 10 Pro ayaa laga yaabaa in la xaqiijiyay.
Waxa kale oo suurtagal noqon kara in Samsung ayaa wax ka beddelay qaabka booska si aad u geliso kaarka SIM-ga, taasoo ka dhigaysa mid sii dheereeya halkii aad uga ballaadhi lahayd sidii hore oo kale, maxaa yeelay baabi'inta suurtagalnimada ballaadhinta kaydinta wax macno ah kuma samaynayso Samsung oo waxay khatar ku tahay macaamiisheeda mustaqbalka ee ay u badan tahay inay ka fogaato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Galaxy Note 10 sidoo kale ma yeelan doono booska ballaarinta microSD
Qofka guriga ku hadla ee Google ka mid noqon maayo qoyska Nest ama magaciisu ma badali doono